Ko kana tambo dzako dzaigona kunamatira kune magineti, dzichigadzira coil yakachena isingabatike mumadhirowa nemabhegi ako? Ko dai dzaivewo tambo dzakanaka dzaigona kuchaja nekuyananisa zvese kuburikidza ne USB-C, Mheni, nezvimwewo?Zvakanaka ... iwe unogona ikozvino kutenga USB tambo inopedza ...
Satechi Inosuma Machaja Matatu Matsva eGaN USB-C
Satechi, inozivikanwa nemutsara wayo wezvishandiso zvakagadzirirwa Apple zvishandiso, nhasi yazivisa matatu USB-C majaja akagadzirirwa kushandiswa nePads, Macs, iPhones, nezvimwe.Satechi's 100W USB-C PD Wall Charger inodhura $69.99 uye, sekutaura kunoita zita, ine imwe USB-C port inochaja kusvika ku100W.The...
Kana iwe uchida kurerutsa ruzivo rwekuchaja kwefoni yako mumotokari yako, inguva yekukwidziridza kugomo remotokari rine MagSafe kuchaja.Haasi chete mamoiri emota aya akanaka pakuchaja pasina waya, anobatsirawo kubhadharisa foni yako nekukurumidza.Zvakare, bvisa zvezvisinganzwisisike semawoko echirimo kana kubata...
ASUS RTX 3050 Ti-powered Strix G17 yemitambo laptop inorova nyowani yakaderera
Amazon parizvino iri kupa iyo Asus ROG Strix G17 Ryzen 7/16GB/512GB/RTX 3050 Ti Gaming Laptop ine shipping ye $1,099.99.Kazhinji mutengo unosvika $1,200 paAmazon, iyi $100 yekuchengetedza inoratidza kuderera-kwenguva kwatakaona palaptop iyi yemitambo. .Newegg parizvino iri kutengeswa ne$1,255. Powered by the Ryz...
Anker ichangoburwa USB-C dock inounza katatu-screen rutsigiro kuM1 Mac
Nepo Apple yekutanga M1-based Macs yaingokwanisa kutsigira zviri pamutemo chiratidziro chekunze chimwe chete, pane nzira dzekutenderedza ichi chinogumira.Anker nhasi akafumura nyowani 10-in-1 USB-C dock inopa izvo chaizvo.Iyo Anker 563 USB-C Dock inosanganisira maviri HDMI madoko uye DisplayPort port, iyo inoshandisa ...
Valve yakakwidziridza Steam Deck isati yatanga
Sekureva kweOngororo Geek, Valve yakagadziridza chinyararire zvakatemwa zveiyo chiteshi chepamutemo cheSteam Deck inobatwa nemutambo PC. Iyo Steam Deck tech specs peji pekutanga yakataura kuti chiteshi chaizove ne USB-A 3.1 chiteshi, maviri USB-A 2.0 madoko, uye chiteshi cheEthernet chetiweki, asi peji kwete...
Zvirinani uye zvakachipa dzimwe nzira tambo USB Type-C kuenda mheni uye USB Type-A kusvika Mheni
Kunyange Apple iri kutama zvishoma nezvishoma kubva pachiteshi cheMheni ichienda ku USB Type-C, mazhinji emidziyo yayo yekare uye iripo ichiri kushandisa Mheni port pakuchaja uye kutumira data. zvinozivikanwa zvisina kusimba uye kutyora f...
USB-C hubs yakawanda kana kushoma huipi hunodiwa
Mazuva ano, USB-C hubs yakawanda kana zvishoma huipi hunodiwa.Mazhinji malaptops ane mukurumbira akadzikisa huwandu hwezviteshi zvavanopa, asi isu tichiri kuda plug mune zvakawanda uye zvakawanda accessories.Pakati pekuda kwema dongles emakonzo uye keyboards, zvakaoma. madhiraivha, mamonitor, uye kukosha kwekuchaja mahedhifoni uye foni...
wall charger green charge hupenyu hungave hunonakidza kana kuchaja zvidhinha kwakafanana nemakomputa madiki eMacintosh?
Mugadziri wemidziyo Shrgeek akatanga Indiegogo kuti ape mari ye35W USB-C charger yakaita sediki Apple Macintosh komputa. beige...
Anker anoti itsva USB-C dock katatu M1 Mac yekunze yekutarisa rutsigiro
Kana iwe uine M1-based Mac, Apple inoti unogona chete kushandisa imwe yekunze yekutarisa.Asi Anker, iyo inogadzira magetsi mabhangi, majaja, docking zviteshi uye zvimwe zvishongedzo, yakaburitsa docking station svondo rino iyo inoti ichawedzera yako M1 Mac. nhamba yezviratidziro kusvika kutatu.MacRumors ku ...
Belkin anoti kuchiri kukasika kutaura nezve machaja echokwadi asina waya
na admin pa 22-05-25
Pakutanga svondo rino, Israel startup Wi-Charge yakaratidza hurongwa hwayo hwekuvhura chaja isina waya isingade kuti mudziyo unge uri paQi dock.Mukuru weWi-Charge Ori Mor akataura kuti chigadzirwa ichi chinogona kuburitswa kutanga gore rino. nekuda kwekudyidzana neBelkin, asi ikozvino iyo acce ...
Kutengesa nharembozha pasina majaja, kukurumidza kuchaja zviyero zvakasiyana, zvinokurumidza here kudzikisa kugoverwa kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza?
na admin pa 20-04-02
Apple yakabhadharisa $ 1.9 miriyoni Muna Gumiguru 2020, Apple yakaburitsa yayo itsva iPhone 12 series.Chimwe chezvinhu zvemhando ina itsva ndechekuti havachauyi nemachaja nemahedhifoni.Tsananguro yeApple ndeyokuti sezvo hutori hwepasi rose hwezvishandiso zvakaita semagetsi maadapter hwasvika ...